China Automatic Butane On Glass 60cm kichin Isi nri Hob ​​Gas cooker Cooktop na-emepụta na ndị na-ebubata |Vangood
Butane akpaaka na iko 60cm kichin esi nri Hob ​​Gas osi nri
Ọnụ ego FOB:Ọnụ ahịa USD, biko hụ ndepụta ọnụahịa maka oke ọnụ ahịa: USD35-65
2 Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Brass Cap arụnyere na gas Hob
Nha panel 760*420mm
Ogo oghere 640*350mm
Nkwakọ ngwaahịa 800*440*210mm
Ihe panel 07mm Igwe ọkụ ọkụ
Ọkụ Nkedo ígwè ọkụ φ 100mm + φ 100mm
Ọkụ okpu ihe Brass
Trivet Nwuo nkedo
Mgbanye ọkụ Mgbanye akpaaka / Mgbanye ọkụ
Ụdị gas: LPG / NG
Ngwaọrụ nchekwa Nhọrọ
Natural gas okpukpu abụọ ọkụ ọkụ desktọpụ ụlọ ma ọ bụ ebumnuche abụọ agbakwunyere
Nkwalite zuru oke, dị mfe iji na ọ bụghị ọnụ, nhọrọ dị mma.
5.0KW e ghere eghe.Ike ọkụ dị elu na-enweta ihe dị ụtọ nke isi nri ndị China, na-emechi ngwa ngwa nri na-edozi ahụ ma na-atọ ụtọ, wee nweta oriri ọ bụla pụrụ iche maka uto uto.
Ọkụ ngwa ngwa 3D, a na-akwalite ike mgbanyụ ọkụ
Ọkụ ọkụ 172 kpọmkwem na-agbasasị na ọkụ akụkụ atọ 3D.Nhazi 3D ọhụrụ na-enye ohere ikesa ọkụ 5.0KW nke ọma, na ala nke ite ahụ na-ekpo ọkụ karịa;ọnụ ụlọ na-enye gas nke ọwa atọ na-ezute nnukwu mmepụta ihe na-asọpụta, na gas na oxygen na-ejikọta ya na ọkụ, si otú a na-enweta ọkụ ọkụ dị elu.
Isi ọla kọpa na-agbakwunye oghere maka ịgbanye ngwa ngwa.
Oghere ọkụ na-ere ọkụ na-abawanye, ọkụ na-apụkwa nke ọma.
Dayameta nke onye na-ere ọkụ na-ebuwanye ibu, na ọkụ na-achịkwa nke ọma.
Ụlọ na-enye ikuku nke ọwa 3 nwere ike ọkụ.
Ọ dị mfe ihicha imewe, akụkụ ndị nwụrụ anwụ anaghịzi eme mmanụ.Ogwe iko nwere iwe, enamel agbakwunyere na tray mmiri dị mfe ihicha, ntụpọ mmanụ na ọkọ na-eguzogide ọgwụ.
Shei ala na-agbanwe agbanwe, nha dabara adaba.Enwere ike ịmegharị oke oghere oghere kachasị: ogologo 645-705mm, obosara 340-400mm.
Ịrụ ọrụ ike nke klaasị mbụ, arụmọrụ dị elu na nchekwa ike, yana ịchekwa ego.Nhazi nke ikuku zuru oke na ikuku oxygen na-eme ka ọkụ ọkụ zuru oke, ọnụ ọgụgụ nke gas na-arụ ọrụ dị elu, na arụmọrụ okpomọkụ dị elu dị ka 63%, nke na-azọpụta ike na gburugburu ebe obibi.
Nchekwa ire ọkụ, nchekwa na enweghị nchekasị.Ọ ga-akwụsị gas na-akpaghị aka ma ọ bụrụ na agbanyụrụ ya na mberede, ọ dịkwa mma mgbe niile.Ọ dịghị mkpa ka a na-echekwa ofe esi nri mgbe niile, na ndị agadi nwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ dị jụụ.
Ihe njide ite na-adịghị na-amị amị na-eme ka ọnọdụ ahụ guzosie ike na ọ naghị amịpụ ite ahụ.
Nke gara aga: Glass arụnyere n'ime ihe ọkụ abụọ na-ekpo ọkụ na-eme ka Iron Domino Gas Hob
Osote: Ewuru na Png 24 inch Black Natural Propane 4 Ọkụ Gas
Ngwa ụlọ kichin 5 Burner Gas Hob nwere St ...